ယူနိုက်တက် နည်းပြသစ် ခန့်မှန်းမှုများ ၊ FIFA The Best စကာတင်တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ယူနိုက်တက် နည်းပြသစ် ခန့်မှန်းမှုများ ၊ FIFA The Best စကာတင်တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
November 23, 2021 - by Editor
ကမ္ဘာ့ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဖီဖာ ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အတွက် ပေးအပ်မယ့် တနှစ်တာ အကောင်းဆုံးဆု တွေရဲ့ စကာတင် အမည်စာရင်း တွေကို ယမန်နေ့ က ထုတ်ပြန် ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
The Best ဆုရဲ့ တနှစ်တာ အကောင်းဆုံး အမျိုးသား ဘောလုံးသမား ဆု အတွက် စကာတင် ၁၀ ဦး ရွေးချယ် ခံခဲ့ရပြီး – ဘန်ဇီးမား ၊ ဒီဘရိုင်းနား ၊ ရိုနယ်ဒို ၊ လီဝန်ဒေါ့စကီး ၊ မက်ဆီ ၊ ဟာလန်း ၊ ဂျော်ဂျင်ဟို ၊ ကန်တီ ၊ ဘာပေ နဲ့ မိုဆာလာ တို့ ပါဝင် လာခဲ့ကြပါတယ် ။
တနှစ်တာ အကောင်းဆုံး အမျိုးသား နည်းပြ စကာတင် မှာတော့ ကွန်တီ ၊ ဟန်ဆီဖလစ် ၊ ဂွာဒီယိုလာ ၊ မန်စီနီ ၊ စကာလိုနီ ၊ ဒီယေဂို ဆီးမြွန်းနီ နဲ့ သောမတ်စ် တူချယ် တို့ ပါဝင်လာခဲ့ ကြပါတယ် ။
တနှစ်တာ အကောင်းဆုံး အမျိုးသား ဂိုးသမားဆု အတွက်ကိုတော့ အက်ဒွာ မန်ဒီ ၊ အဲလစ်ဆင် ဘက်ကာ ၊ ဒွန်နာရမ်မာ ၊ နူအာ နဲ့ ကက်စပါ ရှမိုက်ကယ် တို့ ပါဝင် လာခဲ့ကြပါတယ် ။
ဒီဆု ကိုလာမယ့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ပေးအပ် ချီးမြှင့်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဒီမီတာ ဘာဘာတော့ဗ် ကတော့ ယူနိုက်တက် မှာ ကစားခဲ့ဖူးပြီး PSG ကို ကိုင်တွယ် ခဲ့ဖူးတဲ့ ပြင်သစ် ခံစစ်မှူးဟောင်း လောရင့် ဘလန့် ဟာ လစ်လပ် နေတဲ့ ယူနိုက်တက် ကို ယာယီ ကိုင်တွယ် နိုင်လိမ့်မယ် လို့ ထောက်ခံ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရီယို ဖာဒီနန် ကတော့ ပိုချက်တီနို ဟာ မန်ယူနိုက်တက် နည်းပြသစ် ဖြစ်လာမယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ် ။
သတင်းတွေ ကလည်း ပိုချက်တီနို ဟာ ဒီဇင်ဘာ မတိုင်ခင် မှာဘဲ PSG နဲ့ လမ်းခွဲကာ ယူနိုက်တက် ဆီ ပြောင်းရွှေ့ လာမယ်လို့ ဖော်ပြ လာခဲ့ပါတယ် ။
PSG အသင်းမှာလည်း ယူနိုက်တက် နည်းပြ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုမှုတွေ ရှိနေကာ ဇီဒန်း မကြာခင် ရောက်လာ တော့မယ်လို့လည်း ယုံကြည် နေကြတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ကို လက်ရှိမှာ ယာယီ တာဝန်ယူ ထားတဲ့ မိုက်ကယ် ကာရစ် ကတော့ တိုက်စစ်မှူးလေး ဂရင်းဝုဒ် ဟာ ကိုဗစ်ပိုး တွေ့ရှိမှုကြောင့် သီးသန့် ခွဲနေထိုင် နေပြီး ဒီည ကစားမယ့် ဗီလာရီးရဲ နဲ့ ပွဲကိုလည်း လိုက်ပါ မလာဘူးလို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး နည်းပြ သောမတ်စ် တူချယ် ကတော့ ယူဗင်တပ် နဲ့ ပွဲမှာ ဒဏ်ရာ ကနေ သက်သာလာစ တိုက်စစ်မှူး လူကာကူ ကို အလောတကြီး အသုံးပြု သွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ပဲလေ့စ် နဲ့ ဒီရာသီမှာ ခြေစွမ်းပြ နေတဲ့ ကော်နာ ဂယ်လာဟာ ကတော့ အငှားစာချုပ် ပြည့်ချိန်မှာ ချဲလ်ဆီး ကို ပြန်သွားဖို့ ဆန္ဒ ရှိနေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
မန်စီးတီး မှာ နေရာ ပျောက်နေတဲ့ တောင်ပံ ကစားသမား ရာဟင်း စတာလင် ဟာ ဇန်နဝါရီ မှာ ဘာစီလိုနာ ကို ပြောင်းရွှေ့ ဖို့ အလားအလာ ကောင်းနေတယ်လို့ သတင်းတွေ ပိုမို ကျယ်လောင် လာခဲ့ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ကတော့ ဇန်နဝါရီမှာ တိုက်စစ်မှူးသစ် ရှာပုံတော် ဖွင့်မှာ ဖြစ်ပြီး မန်ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူး ကာဗာနီ ၊ အယ်လ်ဆတ် တိုက်စစ်မှူး Baghdad Bounedjah တို့ကို နည်းပြ ဇာဗီ က စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ရိုးမား နည်းပြကြီး မော်ရင်ဟို ကတော့ ဂျီနိုအာ နဲ့ ပွဲမှာ ၂ ဂိုး သွင်းယူ ခဲ့တဲ့ လူငယ်လေး ဖိလစ် အဖီနာဂျန် ကို ကတိပြု ခဲ့တဲ့ အတိုင်း ယူရို ၈၀၀ တန်ဖိုး ရှိတဲ့ ဖိနပ် တရံကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
လာဇီယို တိုက်စစ်မှူးကြီး ကိုင်ရို အင်မိုဘီလီ ဟာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ရဲ့ တောင်းဆိုမှု အရ ဗာတီကန် စီးတီး က ဝန်ထမ်းတွေ နဲ့ လာဇီယို အသင်းက ဝန်ထမ်းတွေ ကစားတဲ့ ချစ်ကြည်ရေး ရန်ပုံငွေ ပွဲမှာ ဒိုင်လူကြီး အဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့တယ် လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
Previous Article ၂၀၂၁ ခုနှစ် အတွက် ဖီဖာမှ ချီးမြှင့်မယ့် အကောင်းဆုံးဆု ၆ဆုလုံးရဲ့ ဆန်ခါတင် စာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ ချဲလ်ဆီး နည်းပြ ၂ဦးနဲ့ ကစားသမားများ
Next Article မိုဆာလားရဲ့ နေရာကို အစားထိုးသွားရန် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ကစားသမားနဲ့ ပက်သက်ပြီး လီဗာပူးပရိတ်သတ်တွေ ပျော်ရွှင်နေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဝန်ခံလိုက်တဲ့ မာဖီ